Home Wararka Shirkii Garowe ee loo balansanaa oo dib u dhac ku yimid! Maxaa...
Shirkii Garowe ee loo balansanaa oo dib u dhac ku yimid! Maxaa isbadalay?
Shirkii uu horay u iclaamiyay Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo ay ka sooqaybgali lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku wargeliyay madaxda Dowlad Goboleedyada in gebi ahaanba la baajiyay Shirkii Garoowe.
Madaxweyne Deni ayaa go’aankaas qaatay kadib markii madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor uu ka dalbaday in la baajiyo shirka oo looga arrinsan lahaa arrimaha doorashada iyo xaaladda guud ee dalka. Baajinta Shirkaas ayaa muran ka dhex aloosay madaxda dowlad goboleedyada dalka.
In mudo ah ayaa Ra’iisal Wasaare Rooble uu doonayay in shirkaas la baajiyo madaama uu dhaawac siyaasadeed u keeni karo awoodiisa Saiyaasadeed. Rooble ayaa u muuqda in uu meel cidla ah ku soo dhacay ka dib markii Saciid Deni uu si farsamaysan uu ugala wareegan hogaanka Doorashada Dalka.